स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पचली भैरव जात्रा सम्पन्न:: Naya Nepal
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पचली भैरव जात्रा सम्पन्न
काठमाण्डाै – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर काठमाण्डाै टेकुमा रहेको पचली भैरव जात्रा सम्पन्न भएको छ।हरेक वर्ष असोज शुक्ल पञ्चमीका दिन मध्यरातसम्म सञ्चालन हुने जात्रा यसवर्षका कोरोनाका कारण दिउँसो नै गरिएको हो ।
जात्राको क्रममा बुधबार दिउँसो पचली भैरवको आकृतिसहितको सुनको घ्याम्पो, अजिमा र रुद्र विनायक नायखी गणेशलाई टेकुबाट लगन, ज्याबहाल, जैसी देगल, चिकंमुगल, हनुमाढोका परिक्रमा गराइएको थियोे । त्यस्तै परम्परा अनुसार जीवित देवी कुमारीलाईे भैरवको दर्शन गराइएको थियो ।यसवर्षको जात्रामा पीपीई, मास्क, फेसशिल्ड लगाएका भक्तजनहरुले देवताको खट बोकेका थिए । हनुमानढोकामा बली दिएपछि देवदेवीलाई आ-आफ्नो ठाउँमा फर्काएपछि यसवर्षको पचली जात्रा सकिएको हो । आजको जात्राका लागि हिजो मंगलबार पचली भैरवसहितको घ्याम्पोलाई भीमसेनस्थानबाट पचलीमा लगिएको थियो भने विशेष पूजासहित होम गरिएको थियो ।
उपत्यकाका जात्राहरुमध्ये दशैँको समयमा हुने पचली भैरवको जात्रालाई महत्वपूर्ण जात्राको रुपमा लिइन्छ ।
मेरो दसैं सायद अस्पतालकै निवासमा हुन्छ
गएको वैशाख अन्तिमतिर म पहिलो पटक संक्रमित भएँ। त्यो बेला मलाई कोरोनासँग कुनै डर लागेको थिएन। संक्रमितको उपचार र अरु काम गर्न पनि मलाई कुनै डर लाग्थेन। व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाउँदाअपनाउँदै पनि दोस्रो पटक संक्रमित हुन पुगें। त्यसपछि अलि डर लाग्न थाल्यो। त्यो डर अहिले पनि मनमा छ। यो वर्ष दसैंलाई लिएर मेरो कुनै विशेष योजना छैन। अधिकांश जस्तो योजना रद्द गरेको छु। दसैं मनाउन कतै आफन्तकहाँ जाँदाजाँदै बीचमै कोरोना संक्रमण भयो भने के गर्ने ? यस्तै खालको डर लाग्छ। म मात्र होइन, मेरा केही सहकर्मीहरु पनि घरमै सुरक्षित रहेर दसैं मनाउने योजनामा छन्। यदि यस वर्ष पनि पहिलेको जस्तै स्थिति सामान्य हुन्थ्यो भने हामी आफन्तको घरमा जमघट गरेर दसैं मनाउँथ्यौं। यो वर्ष त मेरो कतै जाने योजना नै छैन। म दुई पटकसम्म कोरोना संक्रमित भएँ। त्यसैले पनि यसबाट कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने विषयमै अहिले बढी केन्द्रित भइरहेकी छु। छोरालाई पनि मैले मामाघर पठाएकी छु। त्यसैले मेरो दसैं सायद अस्पतालकै निवासमा हुन्छ होला। घर जाने सम्भावना निकै कम छ। दसैं नेपालीको महान चाड भए पनि हामी सबैले सुरक्षित भएर मनाउनुपर्छ। सकेसम्म धेरै जमघट गर्नु हुँदैन। आफ्नो घरमा परिवारसँग मात्र रमाइलो गरेर पनि दसैं मनाउन सकिन्छ। अहिलेको परिस्थिति सामान्य नभएका कारण पनि आफन्तहरुबीच भीडभाड गर्नु सुरक्षित छैन। दसैंमा धेरै जाँड–रक्सी खानु हुँदैन। स्वस्थकर खानेकुरामा बढी जोड दिनुपर्छ। यसले पनि हामीलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। घर–परिवारमा जो–जति छन्, त्यसमा हामी रमाएर यो दसैं मनाउन मेरो सुझाव छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मानिसले आयुर्वेदिक औषधि जथाभावी प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ । मात्रा नमिलेको र पहिलादेखि लागेका रोगको ख्यालै नगरी मात्रा नमिलेको जडीबुटी खानु शरीरका लागि घातक हुने भनाइ विज्ञको छ ।दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने औषधीय गुण भएका मसलाले स्वाद बढाउने मात्र होइन, औषधिको समेत काम गर्छन् । मसलाको बढी प्रयोगले विभिन्न रोग लाग्ने खतरातर्फ कमैको मात्र ध्यान पुगेको पाइन्छ ।पद्मकन्या क्याम्पसको गृह विज्ञान विभागका प्रमुख पोषणविद् डा. जया प्रधानले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुन आवश्यक भएको बताइन् । उनले कोभिड–१९ लाग्ने डरले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्दै बेसार, मेथी, अदुवा, लसुन, भिटामिन ‘डी’ लगायतका चिज बढी प्रयोग गरेको पाइएको जानकारी दिइन् । यसले गर्दा पनि कतिपय मानिस विभिन्न रोगको सिकार हुनुपरेको अनुभव डा. प्रधानले सुनाए ।नेपालीमा एउटा उखान नै छ, ‘चिनी पनि बढी खाए तीतो हुन्छ’ भने झैँ क्षमता बढाउने नाममा राम्रो जानकारी र मात्रा नमिलाई औषधीय गुण भएका चिज खाँदा समस्या आउने गरेको भनाइ डा. प्रधानको छ ।भान्छामा प्रयोग हुने मरमसला औषधिजन्य हुन्छन्, त्यसमा कुनै द्विविधा नै छैन । धेरै खाने कुरा यस्ता छन् जुन एउटा रोगलाई हुन्छ भने अर्को रोगलाई हुँदैन । उदाहरणका लागि रक्तचाप कम भएको व्यक्तिले गुर्जो तथा बेसार पानीको बढी सेवन गरे खुट्टा बाउडिने तथा रिङ्गटा लाग्ने समस्या हुन सक्ने भनाइ डा. प्रधानको छ ।यता फिजिसियन जेनर तामाङले सामाजिक सञ्जालमा सुनेको भरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खानेकुरा खाएका धेरै बिरामी आउने गरेका छन् । मानिसले कोभिड–१९ सङ्क्रमित सँगको सम्पर्क भएपछि डराएर मात्रा नमिलाई त्यस्ता औषधि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ भने।
सिटीको पुनरागमन जित
एजेन्सी । यूईएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्याचेस्टर सिटीले पुनरागन जित निकालेको छ । बुधबार राति भएको खेलमा सिटीले पोर्टोमाथि पुनरागमन जित निकालेको हो । घरेलु मैदान सिटी अफ म्यानचेस्टर स्टेडियममा भएको खेलमा घरेलु टोलीले पोर्टोमाथि ३–१ को पुनरागमन जित निकालेको हो । सिटीको जितका लागि सर्जिओ अगुईरो, लिक्या गुन्डोगन र फेरान टोरेजले एक एक गोल गरे । पोर्टोका लागि लुइस डियाजले एक गोल गरेका थिए ।खेलको १४ औं मिनेटमा पोर्टोका लुइस डियाजले गोल गर्दै पाहुना टोलीलाई सिटीविरुद्ध अग्रता दिलाएका थिए। उनले उरिबेको पासमा गोल गर्दै पोर्टोलाई १–० को अग्रता दिलाए । तर, खेलको २० औं मिनेटमा म्यानचेस्टर सिटीका लागि सर्जिओ अगुइरोले गोल गरेका हुन् । उनले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । पोर्टोको खेलाडीले पोनाल्टी क्षेत्रमा फाउल गरेपछि भीआरको मध्येमबाट रेफ्रीले सिटीलाई पेनाल्टी अवसर दिएको थियो । जसमा अगुइरोले गोल गर्दै खेल पहिलो हाफमा १–१ को बराबरीमा ल्याका हुन् । त्यसपछि सिटीले दोस्रो हाफमा भने सिटीले थप दुई गोल गर्यो । खेलको ६५ औंमिनेटमा सिटीका मिडफिल्डर लिक्या गुन्डोगनले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई २–१ को अग्रता दिलाए । ७३ औं मिनेटमा फोडेनको पासमा टोरेजले गोल गर्दै सिटीलाई ३–१ को जित दिलाए । जितसँगै समूह सी मा रहेको सिटीले तीन अंक जोड्दै च्याम्पियन्स लिगको सुरुवात गरेको छ । पोर्टोले भने सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा लिगमा खराब सुरुवात गरेको छ । समूह सीकै अर्को खेलमा ओलम्पियाकोसले मार्सेलेलेमाथि साँघुरो जित निकालेको छ । ओलम्पियाकोसको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा मोर्सेले १–० गोलले पराजित भएको हो । जितसँगै ओलम्पियाकोसले पनि समूहमा तीन अंक जाडेको छ ।
६ कात्तिक, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनमा युद्धरत दुवै पक्षलाई युद्धविराम गर्न र शान्ति वार्ताको बाटो रोज्न आग्रह गरेको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एक उच्चस्तरीय बैठकमा महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले यमनको आर्थिक अवस्था नाजुक हुदै गएको र कतिपय स्थानहरुमा नागरिकलाई अहिले पनि मानवीय सहायताको खाँचो परेको भन्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा युद्ध विराम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।महासचिव गुटर्रेसले सो बैठकमा भने, ‘अब यमनमा तत्कालै देशव्यापी रुपमा युद्धविराम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यहाँका युद्धरत पक्षहरुलाई शान्तिका लागि वार्ताको टेबलमा बस्न आग्रह गर्दछु ।’उनले हिंसा गरेर नभई यमनमा राजनीतिक माध्यमबाट राजनीतिक समाधान खोज्ने पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघ रहेको धारणा पनि राखेका थिए । उनले यसअघि पनि केही महिना अघि मात्र यहाँका युद्धरत पक्षलाई हिंसा रोकेर शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान खोज्नका लागि तयार रहन भनेका थिए ।आफूले यस विषयमा पहल जारी राखेको पनि उनले सो बैठकमा जानकारी गराएका थिए । आफूले आफ्ना दूतलाई यमनमा युद्धरत पक्षहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर शान्ति वार्ताको पक्षमा काम गर्न आफूले भनेको उनले जानकारी दिए ।यमन सन् २०१५ देखि गृहयुद्धको चपेटामा फसेको छ । यहाँका हुथी विदोही र सरकारलाई समर्थन गर्ने फौजको संघर्ष जारी छ ।